Qaamni_WBO uummata keessaa baafna jedhee socho’uu fi namni galaana keessaa Lilmee barbaadu tokko! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQaamni_WBO uummata keessaa baafna jedhee socho’uu fi namni galaana keessaa Lilmee barbaadu tokko!
Qaamni_WBO uummata keessaa baafna jedhee socho’uu fi namni galaana keessaa Lilmee barbaadu tokko!
#Qaamni_WBO uummata keessaa baafna jedhee socho’uu fi namni galaana keessaa Lilmee barbaadu tokko!
Namicha Lilmee gate bishaan keessa lilmee barbaadutu jira. Namni kun lilmoo kana hanga argatutti ifaajee tuujuba galaanaa harka kaahee sakattaa’a. Galaanichi jallisaa cirraacha fi dhoqqee qabaachuun oola hinqabu. Lilmoon sun qabuuf dhiisii argamuuf tasayyuu hindandaa’amu. Namichi Lilmoo bishaan keessa barbaadu waan gurguddaa lama dhabe. Tokko yeroosaan Warqee lafatti balleesse. Har’a addunyaa daqiiqaan tokko Warqiirra caaltu keessatti yeroo isaa gubee Lilmoo bishaan keessaa barbaaduun isaaf kisaaraadha. Kan lammataa Lilmoo sana barbaaduutti Qoraattiin garaagaraaf wantootni qara qaban waraanuu danda’u, lubbu qabeeyyiin bishaan keessa jiraatanis hiddanii summiin miidhu malu. Kanaaf kisaaraa lama kisaare jenna. Kun dhimma har’aaf kaaneef fakkeenya malee qabiyyee barruu koo har’aa miti.
Mootummaan uummata keessaa WBO barbaadaa jira. Uummatni Oromoo galaana, galaana keessi isaa dhaabbii hinqabnedha. Galaana kana keessa kan jiru WBO dha. Yaadni Jaal Marroo (Kumsaa Dirribaa) Ajajaa WBO Zoonii Dhihaa kana ibsa. Barruu kiyya yeroo darbeenis kana akeekeera. Qurxummichi qabamuu dide jedheen barreessee ture. Eeyyee uummata Oromoo tiif WBO’n Qurxummii isa keessa jirudha. Uummata galaana keessaa mootummaan WBO barbaadu mootummaa gowwaadha. Gowwaan hindhalatin dhalatu hinguddatin.
Taphi mootummaan miskiinoota maallaqa xiqqaan gowwomsee miindeessee WBO tti bobbaasuudhaan lubbuu isaaniitti taphataa jiru guyyaanni isa gaafatu dhufuu jira. Iyyeessi abiddatti fiigdi buddeen abidda keessaa sii baha jennaan. Waraanni Mootummaa hedduun ishee beelooftuudha. Beelooftuu iyyeessa kana sossobanii Abidda WBO’n tufu keessaa buddeen sii baha jedhanii lubbuu isaaniin kumaaraa siyyaasaa taphataa jiru. Iyyeessi buddeen agartee hinbeekne Abidda kana garas buddeentu jiraa dhageenyaan abiddaan waxalamtee dhumaa jirti. Maaltu qoosaa abiddaa fi qoosaa labooba abiddaa nama dhakate amma? Iyyuma ofiitiin taa’uufii ishee wayya ture. Qooda waan galata hinqabanetti lubbuushee dhabama gootu, qooda foonshee abidda labooba qabsoo Bilisummaa Oromoo tiif finiinu irra wal qabdee wal waaddu, waaddee wal fooneessitu Xuqaa WBO dhaquu dhiisuun iyyumashee har’aa ururfattee bara eeggachuu wayya ture.
Mootummaan ofittoon kun ammoo, magaalaa Finfinnee taa’ee waraana jedhee iyyeeyyii walitti funaanee gara Lixaa fi gara Kibbatti bobbaasee ofii nagaan manasaa jiraataa, ofiisaatii daa’imman biyya alaatti barsiifataa, ofiisaatii guyyaatti Huskii meeqaan qaama dhiqataa oolanii daangaarratti ijoollee iyyeessaa abiddaaf saaxilu. Cubbuun kana caalu hinjiru. Finfinnee taa’anii qaama WBO barbadeessu hundeessanii asii gadi abiddatti daa’imman beelooftuu kana ajajaan du’atti oofu. Abidda uummataan qabatee bobaa’aa jiru kan WBO fi Qeerroon tuqatanii ho’isaa jiran kanatti akka qoraanii waraana Raayyaa ittisa biyyaa ti jedhee darbata. Qoraan abiddatti darbatame utuu hingubatin fayyaa bahaa? Waraanni mootummaa gara WBO deemtu akka Qoraanii kanaati. Gubattee daaraa taatee dachaati! Kanatu malaaf. Utuu ija qabduu, utuu gurra qabduu dhaqaa jirtika. Isa gaara taa’ee ishee ajajee hojiisheen teessuma of jalatti ittisuu barbaaduun gadi bu’ii sakatta’i jechuu maaltu dhorke. Namni nama wal caalaa? Tokko iddoo nagaa, iddoo bashannanaa taa’ee abiddatti isa tokko oofaa jiraachuudhaan siyyaasni oofamaa jiraachuu utuu agartuu maaltu abidda uummataa gidduu galche. Kanaaf ajjeesuu dhaqxee daaraa taatee deebiti.
Qaamni WBO uummata keessaa baafna jedhee socho’uu fi namni Lilmoo bishaan keessa barbaadu tokkuma. Lamaanuu dhumarra milkii dhabuurra darbanii of dhabuuyyuu malu. Uummatni Oromoo galaana calbaq jedhee ciisu kan dhaabbii hinqabnedha. Waraanni isaa eegduu fi gaachanni isaa WBO ammoo, qaama galaana kana keessaa socho’udha. Qaama kana lamaan addaan baasuun, hindandaa’amu yaalamaas ture Kan milkaa’e hinagarre. Waraanni Bilisummaa Oromoo hanga Oromoon jirutti jiraata. Maaliifree? Eegduu fi wabii uummatichi qabutu waraana kana. Waranaa kana jabeeffachuu fi ijaarrachuun dirqama sabichaa waan ta’eef waraanni kun jiraataa barabaraati. Ilmi Oromoo ABO dha, ABO’n ammoo WBO qaba, Qeerroo Bilisummaa Oromoo qaba. Qaamotni kunneen waliin ta’anii uummaticha gara jijjiirama waaraatti fiduuf humnas, beekumsas ciminas qabna. Nii milkoofnas. Dhugaan Oromoo ABO harka jira. ABO Kan humneessee, kan jabeessee jiraachisaa jiru uummata isaa Oromoodha. Ayyaanni ABO ilmaan isaa itti naannaa’ani jiran WBO fi Qeerroodha. Isaan kun lamaan ammoo abbaa isaanii ABO jiraachifachuuf, akeekaaf kaayyoo isaa galmaan gahuuf har’a akkuma qabsootti jiran boris onnatanii qabsaa’anii galma gahiinsaaf nii qabsaa’u!
Injifannoon uummata Oromoo tiif!
Muddee 2019 Gaaffii fi Deebii Hayyuu Oromoo fi Bu'ureessitoota ABO Keessaa Tokko kan Ta'an Dr.
Muddee 2019 Gaaffii fi Deebii Hayyuu Oromoo fi Bu'ureessitoota ABO Keessaa Tokko kan Ta'an Dr.…
Icciitii Masaraa mootummaa keessaa baate! Guraandhala 6, 2021 Walgahii dhoksaan mana maree nageenyaaa masaraatti kaleessaa…